people Nepal » कोरोनाबारे १० हल्ला, जसमा छैन कुनै पनि सत्यता ! कोरोनाबारे १० हल्ला, जसमा छैन कुनै पनि सत्यता ! – people Nepal
कोरोनाबारे १० हल्ला, जसमा छैन कुनै पनि सत्यता !
चैत ४,एजेन्सी : विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्र छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे कयौं मनगढन्ते कुरा हुँदै आएका छन् । मानिसहरु कोरोनाबारे अफवाहको शिकार भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसबारे जोडिएका १० अफवाह जसलाई हामीले सत्य सोँचिरहेका छौं । १० गलत हल्लाको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
९.–आफ्नो मनमा यो भम्र नपाल्नुस् कि कोराना भाइरस रोगीलाई ‘एपन्टवाइटिक’बाट निको पार्न सकिन्छ । यदि अस्पतालमा तपार्इँलाई ‘एन्टिवाइटिक’ दिइँदै छ भने त्यो केवल किटाणुको ‘इन्फेक्शन’को कारणले दिइएको हो ।